War - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 8)
Inaad Mac ka iibsato Shiinaha hadda way ka jaban tahay
Apple wuxuu jaray qiimaha Shiinaha markale si uu uga baxo rubucii hore ee tabanaa
Muhiim, ECG on Apple Watch, nooca ugu dambeeya ee macOS iyo wax badan oo dheeraad ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Mar labaad oo Axad ah ayaan ku soo uruurineynaa wararkii ugu fiicnaa toddobaadkan ee Soy de Mac
AirPods lama hagaajin karo
Marka sanadaha ay socdaan, tikniyoolajiyadu waxay u saamaxaysaa soo saarayaasha in ay soo saaraan aalado yar yar iyagoo xooga saaraya tiknoolajiyadda gudaha…
Saldhigga lacag-bixinta ee AirPower ugu dambayn ma arki doono iftiinka maalinta, sida laga soo xigtay dhexdhexaadinta TechCrunch iyada oo loo marayo isgaarsiinta ay ka heshay Apple.
Wadamada halka ay hawsha ECG ee Apple Watch Series 4 horeba loo heli karo
Shaqada ECG ee Apple Watch ayaa hadda laga heli karaa Spain sida wadamada kale. Haddii aad rabto inaad ogaato, kuwaas oo markaa aan faahfaahin ka bixinno.
Barnaamijka TV-ga cusub ayaa sidoo kale laga heli doonaa jiilka 3aad ee Apple TV
Jiilka seddexaad ee Apple TV wuxuu sidoo kale lahaan doonaa qashinkiisa dalabka TV-ga la cusbooneysiiyay, si uu u cuno waxyaabaha ku jira adeegyada fiidiyowga ee kala duwan
Haa, ka dib markaad cusbooneysiiso macOS 10.14.4 waa inaad xaqiijisaa xisaabaadka Gmail
Ka dib markii la bilaabay rasmiga rasmiga ah ee macOS 10.14.4 waa inaan galnaa lambarka sirta ah ee xisaabaadka boostada qaarkood ee barnaamijka Mail
Apple wuxuu qirayaa arrimaha jiilka seddexaad ee kumbuyuutarka
Apple wuxuu qirayaa qodobada Keyboard-ka 2018-aad ee Balanbaarta MacBook Pro 2018 iyo Noocyada MacBookga XNUMX
Horumariyayaashu waxay ku rajo weyn yihiin Apple Arcade, laakiin gabi ahaanba maaha
Inta badan soosaarayaasha qayb ka noqon doona Apple Arcade aad ayey u rajo fiican yihiin sidoo kale waxay muujinayaan xoogaa shaki ah.
Waxqabadka ECG wuxuu gaari karaa Apple Watch Series 4 ee wadamada Yurub ee watchOS 5.2
Waxqabadka ECG wuxuu gaari karaa Apple Watch Series 4 ee wadamada Yurub ee watchOS 5.2, sida ku cad macluumaadka laga helay macruufka 12.2
Apple Pay waxay ku dhowdahay inay gaarto Austria
Wadanka xiga ee Apple Pay laga heli doono, sida ay sheegeen bangiyada laftoodu, waxay noqon doontaa Austria, halkaas oo ay dhowaan iman doonto.
Goldman Sachs wuxuu ku dhawaaqay inay ka shaqeynayaan sidii ay u keeni lahaayeen kaarka Apple dalal badan oo adduunka ah
Maamulaha guud ee shirkadda Goldman Sachs ayaa si cad ugu dhawaaqay in mustaqbalka ay qorsheynayaan in ay keenaan kaarka Apple wadamo badan oo adduunka ah. Soo ogow!
Kuwani waa qaar ka mid ah ciyaaraha ka iman doona gacanta Apple Arcade
Intii lagu guda jiray munaasabaddii ay Apple qabatay shalay, mid ka mid ah dhinacyada sida weyn u soo jiitay dareenka dadka jecel ...
Apple wuxuu sii daayaa Cusboonaysiinta Barnaamijka HomePod 12.2
Ka dib markii la sii daayay macruufka 12.2, barnaamijka HomePod wuxuu sidoo kale helay casriyeyn u dhiganta softiweerka oo u keenaya isla nooc.
Apple waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda TV-ga oo ay ku jiraan Apple TV Channels iyo Apple TV +, adeegiisa fiidiyowga ee dalbashada
Apple waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah wararka ku saabsan baahinta dhacdadeeda, oo ay ku jiraan Apple TV Channels iyo adeegooda u gaarka ah, Apple TV +.
Kaadhka Apple waa habka lacag bixinta cusub ee ay Apple na siiso
Haddii aad la socotey wararka tikniyoolajiyadda Apple dhowr sano, hubaal waad xusuusan doontaa sheeko war la daabacay dhowr sano ka hor ...
Amarada ugu horeeya ee AirPods 2 waxaa la soo diri doonaa laga bilaabo Talaadada
Amarada ugu horeeya ee AirPods 2 waxaa la soo diri doonaa laga bilaabo Talaadada. Qalabka cusubi wuxuu leeyahay ugub cusub lacag-la'aanta wireless-ka iyo H1 chip
Qaar ka mid ah dukaamada Apple ayaa si toos ah u baahin doona qodobbada muhiimka ah ee Isniinta
Apple waxay ku baahin doontaa shaashadaha qaar ka mid ah bakhaarradeeda muhiimka ah Isniinta soo socota, Maarso 25
Laba nuglaanshaha eber-maalin ayaa laga ogaadey Safari
Intii lagu gudajiray Abaabulka Maalinta Astaamaha, oo lagu qabtay magaalada Vancouver, laba ka-faa'iideysi cusub oo eber-maalin ah oo saameynaya biraawsarka 'macOS Safari' ayaa la soo saaray.
Microsoft hadda waxay sii deysay antivirus-ka difaaca ee Mac-da, kaftan la'aan
Shirkada Microsoft ayaa hada daabacday warka ku saabsan soo bandhigida antivirus-ka ay ku difaacdo Mac
Waxyaabo cusub oo loogu talagalay jilayaasha taxanaha Apple ee uu jilayo Chris Evans
Chris Evans wuxuu ka mid noqon doonaa jilayaasha riwaayadaha cusub ee taxanaha ah oo qayb ka noqon doona buugga adeegga fiidiyowga ee fiidiyoowga Apple.
Apple waxay si rasmi ah u bilawday AirPods cusub!
Jiilka labaad ee cusub ee AirPods ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple
Hal usbuuc ka badan, wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple ayaa looga hadlay Podcast-ka tafatirayaasha Soy de Mac iyo Actualidad iPhone.
Saldhigga kuleylka ee AirPower wuxuu kudhawaanayaa suuqa, sida ku cad beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 12
Marka loo eego lambarka beta ee iOS 12.2, saldhigga lacag-bixinta ee AirPower waxay u badan tahay inuu suuqa yaal. Markan, waxay u muuqataa sidaas.
Dhacdadu waxay horeyba uga muuqatay barnaamijka Apple TV
Dhacdada Apple ee Isniintaan, Maarso 25, waxay horeyba uga muuqatay barnaamijka loogu talagalay Apple TV. Halkaas waxaad toos ugala socon kartaa
Netflix waxay ka go'daa adeegga fiidiyowga ee Apple
Netflix waxay ka duwan tahay adeegga fiidiyowga ee Apple iyo agaasimaheeda gaarka ah ayaa mas'uul ka ah dayactirka masaafada labada shirkadood
Qaar ka mid ah taxanaha asalka ah ee Apple horey ayey u dhammeeyeen duubista
Sida laga soo xigtay The New York Times, duubista taxanaha qaar ayaa horeyba u dhammaaday, sidaa darteed waxaa lagu soo bandhigi karaa dhacdada xigta ee Apple.
Apple waxay xireysaa dukaanka internetka waxaana la filayaa inay soo kordhiso qalab cusub
Dukaanka khadka tooska ah ee Apple waa la xiray oo wararka xanta ah ee ku saabsan bilaabida jiilka labaad ee AirPods iyo saldhigga AirPower ayaa si toos ah uga socda internetka.
Xiriirkaagu maahan: Siri kama shaqeeyo meelo badan oo Yurub ah
Siri wuxuu ku burburi lahaa meelo badan oo Yurub ah, taasoo ka dhigeysa dad fara badan oo ku baahsan qaaradda adeeg la’aan iyo jawaabo la’aan.
Phil Schiller wuxuu ka soo muuqanayaa Accidental Tech Podcast isagoo marti ah, isagoo ka hadlaya WWDC
Phil Shiller wuxuu u muuqday marti-qaade marti ah 'Podcast Accidental Tech Podcast', halkaas oo uu kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo WWDC ah.
Muhiimka ah Xaqiijiyay, WWDC Xaqiijiyay, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple wuxuu xaqiijinayaa furaha Maarso iyo WWDC toddobaad gudihiis. Waxaan sidoo kale iftiimineynaa wararka kale ee muhiimka ah ee usbuuca
Apple wuxuu soo daayaa natiijooyinka daraasadda wadnaha adoo adeegsanaya Apple Watch oo leh dawada Standford
Shirkadda Apple ayaa si rasmi ah u soo saartay natiijada daraasadda ay wadnaha ka wadday shirkadda Apple Watch oo kaashanaysa shirkadda Standford Medicine.
Apple wax dhaqaale ah magdhow ugama bixin doonto fanaaniinta lagu casuumay kalfadhiyada "Maanta Apple": waxay ku siiyaan iyaga wax soo saar ee kuma siiyaan lacag
Sida lagu sheegay warbixin cusub, waxay u muuqataa in Apple aysan magdhow ku siin doonin maanta fanaaniinta Apple lacag, laakiin ay siin doonaan badeecado taas bedelkeeda.
LG waxay Daahfureysaa AirPlay-ka koowaad iyo Moodellada TV-ga ee iswaafajin kara Bisha Soo socota
LG waxay caddeysay in bisha Abriil ee soo socota aad awoodi doontid inaad iibsato moodooyinka E9 iyo C9 ee telefishannadooda, iyadoo lagu taageerayo HomeKit iyo AirPlay.
Google ugu dambeyntii wuxuu u shaqeeyaa inuu ku xaliyo ciladaha leh Chrome markii uu ka shaqeynayo shaashadda buuxda ee Mac
Google ayaa ugu dambeyntii si rasmi ah u shaqeyneysa si ay u hagaajiso cayayaanka kaa hor istaagaya inaad aragto baarka sare ee Chrome for Mac shaashad buuxda.
DropBox wuxuu ku xaddidayaa isticmaalka xisaabaadka bilaashka ah 3 qalab
Adeegga keydinta daruuraha Dropbox wuxuu bilaabay inuu xaddido gelitaanka marinkiisa adeegsadayaasha bilaashka ah ilaa 3 qalab.
Hadda waa Qualcomm cidda bixin doonta lacag ku dhow 1.000 milyan oo doolar Apple
Xukunka ayaa ku qasbaya Qualcomm inuu siiyo ku dhowaad $ 1.000 bilyan shirkadda Apple
Tartanka: koontada (akoonka) koontadaada casriga ah
Discover Bnext, oo ah codsi ku siinaya koontada hadda (miiska) oo aan lahayn khidmad ama guddi iyo kaarka lacag-bixinta ee mobilkaaga.
Xaqiijiyay! Taariikhda WWDC ee sannadkan waxay noqon doontaa 3-7 Juun
Taariikhda WWDC ee sanadkan 2019 ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyey. Meeshu waxay noqon doontaa San José waxayna dhici doontaa Juun 3 ilaa 7
Apple Music hadda waxaa laga heli karaa Amazon Fire TV
Adeegga muusigga ee qulqulaya ee Apple Music ayaa laga helay sanduuqa set-top ee Amazon, Fire Stick TV.
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee Reeder 4 wuxuu la yimaadaa warar muhiim ah
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee Reeder 4 wuxuu la yimaadaa warar muhiim ah sida habka mugdiga ah iyo iswaafajinta iCloud
Movistar wuxuu ku dhawaaqayaa eSIM ee Apple Watch ee bisha Maarso 29
Movistar wuxuu si rasmi ah u xaqiijiyay in eSIM ee Apple Watch uu imaan doono laga bilaabo Maarso 29: taariikhaha, qiimaha iyo dhamaan macluumaadka.
Google Chrome horeyba wuxuu u leeyahay qaab mugdi ah macOS
Imaatinka habka mugdiga ah ee Google Chrome waa warka laga sii daayay Google dhowr saac ka hor
Falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in adeegga fiidiyowga ee Apple uu gaari karo 100 milyan oo macaamiil ah
Falanqeeyayaasha qaar ayaa durbadiiba ku booday barkadda iyagoo sheegaya in adeegga fiidiyowga ee Apple uu ku socon karo 100 milyan oo macaamiil ah 3 sano gudahood
Nooc cusub oo ka mid ah taxanaha "Geesiyaasha waqtiga" ayaa ku imaan doona adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple
Apple waxay heshiis la gashay 2018 si ay u duubto nooc cusub oo ah Terry Gilliam's Time Heroes oo loogu talagalay adeegga fidinta fiidiyowga.
Donald Trump ayaa sharraxaya sababta uu magaciisa ugu beddelay Tim Cook
Donald Trump ayaa isku dayay inuu caddeeyo sababta uu magaca ugu beddelay Tim Cook una beddelay Tim Apple.
Waa rasmi, Apple waxay xaqiijineysaa Qodobka 25 ee Maarso: "Waa waqtigii bandhigga"
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijisay una soo dirtay casuumaad Muhiim ah 25-ka Maarso tiyaatarka Steve Jobs, iyadoo hal ku dhigeedu yahay "Waa waqtigii show"!
Fitbit Versa Lite waa fitnada cusub ee Fitbit ku leedahay wearables
Soo-saaraha Fitbit wuxuu soo saaray nooc cusub oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee 'Versa', oo loo yaqaan 'Versa Lite', oo ah nooc leh astaamo ka qiimo yar asalka.
Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha Apple waxay u heellan yihiin deegaanka
Apple waxay daabacday warbixinteedii saddex iyo tobnaad ee alaab-qeybiyeyaasha iyo halka aan ku aragno sida ay uga go'antahay bay'adda inay sii ahaato mid aad muhiim u ah.
Apple wuxuu lumiyay mid ka mid ah markhaatiyaashiisii ​​ugu muhiimsanaa dagaalkii uu la galay Qualcomm
Mid ka mid ah markhaatiyaasha Apple, oo uu ku meeleeyey in badan oo ka mid ah difaaciisa, ugu dambayntii kama marag furi doono Apple dacwadiisa ka dhanka ah Qualcomm
AirPods 2, Zero Project, Bob Iger iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan ku soo aruurineynaa qaar ka mid ah wararkii ugu fiicnaa ee usbuuca ee aan ka imid Mac
Apple waxay ka abuureysaa 1200 shaqooyin softiweer iyo qalab ah San Diego
Apple waxay magaalada San Diego ka abuuri doontaa 1200 shaqooyin softiweer iyo qalab ah, laga bilaabo dhammaadka sanadka 2019 illaa dhammaadka 3da sano ee soo socota.
Nuqul burcad badeed ah oo ah Aquaman oo ku jira 4k, ayaa soo jeedinaya in ilaalinta iTunes-ka la jabiyay
Difaaca ay Apple ku dhexgaleyso filimada iTunes-ka ayaa lagu xadgudbi lahaa filimka Aquaman ee tayada 4k ah.
Bob Iger, Agaasimaha Guud ee Disney, waa inuu ka degaa xilka agaasimayaasha Apple
Sida laga soo xigtay Bloomberg, Bob Iger, agaasimaha guud ee Disney oo sidoo kale ku fadhiya guddiga sare ee Apple, waa inuu ka tago Apple.
Kabtan Marvel xiddig Brie Larson inuu jiheeyo oo uu jilo riwaayad loogu talagalay adeegga qulqulka Apple
Brie Larson, atariishada jileysa Captain Marvel, ayaa jileysa oo jileysa riwaayad taxane ah oo loogu talagalay Apple Video.
Apple waxay sii deysaa Warbixinta Mas'uuliyadda Iibiyaha 2019
Apple waxay daabacdaa warbixinta mas'uuliyadda alaab-qeybiyaha sannadka 2019. Iyadoo in ka badan 770 muunad, waxay qiimeysaa xaaladaha shaqada waxayna dhiirrigelisaa tababar
Daraasad IDC ah ayaa loo caleemo saaray Apple Watch oo ah tii ugu iibinta badnayd ee smartwatch-tii hore ee 2018-kii
Daraasad cusub oo ay sameysay IDC ayaa shaaca ka qaaday in Apple Watch uu ahaa midka ugu iibinta badan smartwatch sanadkaan 2018.
LG 2019 TVs waxay noqon doonaan AirPlay iyo HomeKit iswaafajin bartamaha sanadka
LG lafteeda ayaa xaqiijineysa in bartamaha sanadkan ay bilaabi doonaan cusbooneysiinta si TV-ga ay ula jaanqaadaan Homekit iyo AirPlay 2
Apple waxay diiwaangalisay domain privacyisimportant.com, iyagoo ka tagaya caddeynta degel cusub oo ku saabsan asturnaanta
Laga soo bilaabo Apple waxay go'aansadeen inay ka iibsadaan domain PrivacyIsImportant.com, oo laga yaabo inay martigeliso degel leh macluumaad ku saabsan macluumaadka gaarka ah.
Injineerrada softiweerku waxay hadda ka muhiimsan yihiin injineerada qalabka dhismaha ee shirkadda Apple
Sida laga soo xigtay shabakadda Thinknum, Apple mudnaanta uu hadda siinayo shaqaalayntu waxay diiradda saareysaa injineerada software-ka, iyadoo laga tegayo injineerada qalabka dhismaha.
Beta beta afaraad ee tvOS 12.2 iyo watchOS 5.2 oo hada loo heli karo horumariyeyaasha
Ragga ka socda Cupertino waxay sii daayeen beta-kii afaraad ee dhammaan nidaamyadooda hawlgalka oo ku xaddidan kaliya bulshada horumariyaha.
Google wuxuu ka helay qalad 'darnaan aad u sareysa' macOS kernel
Google wuxuu ka helay cillad "darnaan sare" macOS Mojave kernel
Fikradda ah waxa watchOS 6 u ekaan karto
Waxaan ku tusineynaa fikrad cajiib ah oo ku saabsan sida nooca xiga ee nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay Apple Watch uu noqon karo, watchOS 6
Cilmibaaraha soo helay godka keyword keyword macOS wuxuu ugu dambeyn la shaqeeyaa Apple
Cilmibaaraha daahfuray godka keyword key macOS wuxuu ugu dambeyn lashaqeynayaa Apple. Apple waa inay dib u eegis ku sameysaa barnaamijkeeda abaalmarinta
La socodka hurdada, muraayadaha casriga ah ee loo yaqaan 'patent smart', Thundercalp iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan horeyba u joognaa bishii Maarso waxaanan haynaa soo koobid leh qaar ka mid ah wararka ugu fiican ee usbuuca ee aan ka imid Mac
Apple waxay raadineysaa Injineerro Software-ka Ka Badan Injineerada Qalabka
Apple waxay raadineysaa injineerada software-ka ka badan injineerada qalabka. Marka la eego tirada qalabka Apple, baahida isticmaalayaashu waxay marayaan barnaamijka softiweerka ah.
Macallin reer Virginia ah ayaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah ka dib markii uu helay in ka badan 200 akoonnada iCloud iyo adeegyo kale sanadkii 2014
Macallin wax ka dhiga dugsi sare oo ku yaal gobolka Virginia ayaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah kadib markii uu sanadkii 200 la soo galay in ka badan 2014 oo koontada iCloud ah oo uu la galay Celebgate.
Xeerar cusub oo loogu talagalay Apple Podcast metadata xadidaadda sharaxaadda
Shuruucda cusub ee Apple Podcast metadata xaddidaadda sharaxaadda. Apple waxay dooneysaa inay ku dabaqdo tayada sharraxaadda oo ay baabi'iso xogta aan faa iidada lahayn
Siyaasadaha Apple ee ka dhanka ah xog ururinta ayaa faa'iido u leh suuqa caafimaadka dhijitaalka ah
Apple waxay mar kale difaacday daaweynta dijitaalka ah ee ay ka sameyso xogta caafimaadka isticmaaleyaasha, taas oo u oggolaaneysa inay noqdaan tixraac suuqa marka loo eego arrimaha gaarka ah
Sida laga soo xigtay warbixin cusub, waxay u muuqataa in, ugu yaraan Mareykanka, iibinta muusikada ee warbaahinta jirka (CD-yada iyo vinyl) ay mar hore dhaaftay iTunes Store.
Apple waxay maamuustaa barnaamijyada iyo hal abuureyaasha Maalinta Haweenka Adduunka
Apple waxay tixgelin siisaa haweenka bishaan Maarso
Apple Watch waxay la wareegtay kalabar suuqa smartwatch rubucii ugu dambeeyay ee 2018
Kaliya Apple Watch ma kordhinin aaladaha la iibiyo sanadkaan 2018 oo dhan, laakiin sidoo kale Samsung, Fitbit iyo Garmin, iyo kuwa kale.
Bakhaarka Apple ee Bondi Junction Apple Store wuxuu xirayaa dayactirka bisha Maarso 24
Dukaanka Apple ee Bondi Junction Apple Store wuxuu xirmayaa dayactirka bisha Maarso 24. Ma naqaanno astaamaha dib-u-habeynta.
Apple waxay shaqada ka eriday 190 shaqaale oo ka tirsan qaybta baabuurta ee iskeed u shaqeysa
Bil ka dib markii la isla dhex marayay in mashruuca wadista iswada ee Apple uu qarka u saaran yahay inuu qofka ka tuuro, cayrinta 200 oo shaqaale ah ayaa la xaqiijiyay
Weerarada xaasidnimada leh ee Mac wuxuu ku imaan karaa dekedda Thunderbolt 3
Weerarada xaasidnimo ee Mac-du waxay ku imaan karaan dekedda Thunderbolt 3, iyadoo la siinayo mudnaanta hoose ee looga baahan yahay xiriirkan marka la barbar dhigo USB-A
Hulu waxay hoos u dhigeysaa qiimaha qorshaheeda iyadoo si rasmi ah loogu dhawaaqayo
Hulu waxay ugu dambayntii go’aansatay inay hoos u dhigto qiimaha qorshaheeda lacag bixinta aasaasiga ah ee xayeysiinta ah $ 5,99 bishiiba, iyadoo soo jiidasho leh. Soo ogow!
USB 3.2 oo leh xawaare gaaraya 20 Gbps ayaa diyaar ah, waana arki doonaa iyadoo la adeegsanayo kahor dhamaadka sanadka
USB-ga cusub ee 3.2 ayaa diyaar u ah imaatinkiisa, isagoo bixinaya xawaare sare oo xog wareejin ah illaa 20 Gbps. Baro wararka iyo taariikhaha.
Qeybtii ugu dambeysay ee barnaamijkayaga 'podcast', waxaan ka hadalnay taleefannada gacanta ee laabma oo ay soo bandhigeen labada Samsung iyo Huawei iyo waxa aan ka filan karno Apple.
Caqabad cusub oo Apple Watch u dabaaldegtay Maalinta Haweenka Adduunka
Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Apple waxay noo diyaarisay caqabad cusub, oo ah caqabad markan aad u fudud in la gaaro.
Patent-kii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu na tusayaa muraayado awood u leh inay muujiyaan qodobbada xiisaha u leh magaalooyinka
Apple waxay daabacday patent cusub, taas oo ay ku tusinayso muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ee awooda inay muujiso oo aqoonsato astaamaha astaanta.
Apple waxay ku dari doontaa muuqaal si ay ula socoto hurdada, waa muuqaal soo bixi doona sanadka dambe
Sanadka soo socda Apple Wach wuxuu dhexgeli karaa nidaamka kormeerka hurdada asal ahaan, sida lagu sheegay daabacaadda Bloomberg
Hoyga Google iyo Smart Displays ayaa dhawaan yeelan doona suurtagalnimada adeegsiga Apple Music
Hoyga Google iyo Smart Display ayaa dhawaan yeelan doona suurtagalnimada in loo isticmaalo Apple Music habka muusikada socodka. Halkan ka ogow!
Tycoon Buffett wuxuu hayaa saamiyada Apple xitaa wuu iibsan lahaa wax badan haddii ay ku dhacaan qiimaha
Tycoon Buffett wuxuu hayaa saamiyada Apple xitaa wuu iibsan lahaa wax badan haddii ay ku dhacaan qiimaha. Waa mid ka mid ah saamileyda waaweyn ee shirkadda Apple.
Apple News ee Dhibaatada: Qoraalada Sheeganaya Inaan Helin Dakhli Muhiim ah
Daabacadaha ayaa ka cabanaya dakhliga hoose ee ay ka helaan Apple News, oo ka dhigan kaliya 20% dhammaan booqashooyinka la bixiyo.
Apple Watch wuxuu badbaadiyaa nolosha haweeney qabta cudurka atrial fibrillation
Taxanaha 'Apple Watch Series 4' wuxuu awood u yeeshay inuu badbaadiyo nolosha haweeney qabta wadno-goynta wadnaha iyada oo ay ugu wacan tahay shaqada ECG, ogow!
Jeff Williams, oo ah madaxa howlgalka Apple, wuxuu ka warqabaa welwelka ay isticmaalayaashu ka qabaan qiimaha wax soo saarkooda
Sida laga soo xigtay Jeff Williams, falanqeeyayaashu marna kuma baraarugsana qiimaha dhabta ah ee wax soo saarka Apple.
Tim Cook wuxuu ku siin doonaa cinwaanka bilowga Jaamacadda Stanford
Tim Cook wuxuu bilaabi doonaa khudbadda bilowga ee Jaamacadda Stanford Juun 16 wuxuuna ka hadli doonaa dhaqanka xogta iyo asturnaanta
MacBook Pro 16 ″, Dukaanka New York, Kooxda FaceTime iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal maalin oo Axad ah waxaan ku soo qaadaneynaa soo uruurinta wararka toddobaadkan Soy de Mac. Warar dhowr ah oo xiiso leh oo ku saabsan irdaha MWC
Madaxweyne ku xigeenka Apple ee caafimaadka ayaa xoojinaya sida ay shirkadu ugu heelan tahay caafimaadka
Madaxweyne ku xigeenka Apple ee caafimaadka ayaa xoojinaya sida ay shirkadu ugu heelan tahay caafimaadka. Dr. Sumbul Desai wuxuu siiyay wareysi si uu uga faalloodo horumarka
Dropbox wuxuu ku dhawaaqayaa maamulo badan oo kooxo ah oo ku saabsan ganacsiga qorshooyinka ganacsiga
Dropbox ayaa ku dhawaaqday in dhawaan ay jiri doonto suurtagalnimada in maamulo guud laga yeesho dhammaan mashaariicda ku jira qorshooyinka Ganacsiga.
Intel laftiisa waxay rajeyneysaa Macs inay qaadaan Chips-ka ARM laga bilaabo 2020
Intel laftiisu waxay rajeyneysaa in Macs ay sidato Chips-ka ARM laga bilaabo sanadka 2020. Mashruuca Marzipan wuxuu umuuqdaa mid sii xoogeysanaya waxaanan arki doonaa horumarka 2021
Naqshadeynta qaabdhismeedka cusub ee Mac Pro waxay macnaheedu noqon kartaa wadayaal badan oo is dul saaran
Naqshadeynta qaabdhismeedka cusub ee Mac Pro waxay macnaheedu noqon kartaa wadayaal badan oo is dul saaran. Waxaan ku tusineynaa fiidiyow halka suurtagalnimada lagu arkay.
Horumariyaasha reer yurub waxay sameyn lahaayeen 25.000 milyan oo doolar ilaa iyo hada mahadi ha ka gaartee App Store
Apple ayaa soo warisay in, mahadsanid App Store, horumariyeyaasha Yurub ay heli lahaayeen in kabadan 25.000 milyan oo doolar.
Apple waxay hoos ugu dhacday kaalinta 17aad liiska shirkadaha ugu hal abuurka badan
Apple ayaa hoos uga dhacday kaalinta koowaad illaa iyo 17aad liiska shirkadaha ugu hal abuurka badan adduunka, maadaama shaqadeeda ugu fiican ay tahay A12 Bionic Chip.
Marzipan wuxuu joogi doonaa daabacaddan WWDC 2019
Marzipan waa mashruuca Apple si loo mideeyo abuurista iyo horumarinta barnaamijyada labada iOS iyo macOS. Waxaan ku arki doonnaa qeybtan WWDC
Chips Jiilka 9aad ee Mustaqbalka iMac iyo MacBook Pro Waxaa laga yaabaa inay yeeshaan Koolal Badan
Jiilka 9aad ee jiilka mustaqbalka ee iMac iyo MacBook Pro ayaa laga yaabaa inuu yeesho burooyin badan. Waxay isu diyaarin doonaan rubuca labaad ee 2019
Mexico waxay dhawaan yeelan doontaa Apple Store rasmi ah oo labaad
Apple waxay si adag uga shaqeyneysaa dukaanka cusub ee Apple ee ku yaal magaalada Mexico City. Hawlaha dhismaha ayaa laga yaabaa inay dhammaadaan 2019-ka
Apple waxay dib u bilawday barnaamijkeedii xiriirka la lahaa isbedelo badan iyo horumarin badan
Apple waxay go'aansatay inay dib u bilowdo barnaamijkeeda xiriirka u gaarka ah, oo leh isdhexgal gabi ahaanba la cusbooneysiiyay iyo shaqooyin, halkan ka ogow!
Google Keep ayaa si rasmi ah u timid Apple Watch
Google waxay soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan Google Keep ee iOS, iyada oo iyada hadda loo isticmaali karo si toos ah Apple Watch.
Apple Pay waxay hadda taageertaa 28 baan oo cusub
8 Adeegga lacag-bixinta wireless-ka ee Apple, Apple Pay, ayaa hadda ballaariyay tirada bangiyada la taageero ...
Mashruuca dukaanka Westfield Valley wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay
Mashruuca dukaanka Westfield Valley wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay. Dukaankan ayaa ka mid ah dukaamada caanka ah ee Apple.
Iibinta HomePod waxay usii kordheysaa si tartiib tartiib ah
Ku hadla caqli badan ayaa xubin ka noqday qoysas badan. Markii bilooyinku socdaan, lambarka ...
TweetDeck for Mac waa la cusbooneysiiyey xallinta isticmaalka xusuusta xad-dhaafka ah
TweetDeck ee macOS ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro hagaajinta cillad halis ah oo u horseedaysay inay cuno RAM aad u badan.
Shirkadda Apple Pay waxay si rasmi ah u gaadhay dalalka Sacuudi Carabiya iyo Czech Republic
Waa rasmi hadda: Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa Sacuudi Carabiya iyo Czech Republic dadka isticmaala. Halkan ka baro bangiyada iswaafajiya iyo dhammaan xogta.
Wicitaanka Kooxda FaceTime uma shaqeeyo sidii ay u shaqaysay markii la bilaabay
Balastar-ka ay Apple sii deysay ee iOS 12.1.4 si loo xalliyo dhibaatada amniga ee FacTime uma oggolaanayo in lagu daro wicitaanno cusub wicitaan horey u socday.
Beta seddexaad ee loogu talagalay macOS Mojave 10.14.4 horumariyeyaasha hadda la heli karo
Nooca saddexaad ee macOS Mojave, gaar ahaan nooca 10.14.4, ayaa hadda loo heli karaa bulshada soo-saaraha Apple.
Apple waxay daraaseysaa suurtagalnimada in laga furo Bakhaar cusub oo Apple ah magaalada New York
Qorshayaasha ballaarinta Apple waxay umuuqdaan inay ku lug leeyihiin furitaanka Dukaan cusub oo Apple ah oo ku yaal Magaalada New York.
Apple waxay shaqaaleyneysaa madaxii hore ee Microsoft si ay u xoojiso aaggooda guryaha
Shirkadda Apple ayaa dhowaan shaqaalaysiisay Sam Jadallah, oo hore uga ahaan jiray shirkadda Microsoft, si ay u horumariso qalabaynta guriga iyo qaybta HomeKit. Soo ogow!
Sii dusiyey taariikhda WWDC, dhacdo bishii Maarso, jiilka labaad ee AirPods iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan helnay warar muhiim ah oo ku saabsan daadinta taariikhaha WWDC, warar xan ah oo ku saabsan AirPods iyo taariikh suuragal ah inay dhacdo bisha Maarso
Apple waxay iibsataa PullString, oo ah shirkad u heellan hagaajinta Amazon Alexa
Apple waxay dhawaan iibsan lahayd bilawga PullString, oo mas'uul ka ah qayb ka mid ah horumarinta Amazon Alexa, si loo hagaajiyo sirdoonka Siri.
Twitter ayaa sii waday inay keydiso fariimaha tooska ah ee la tirtiray sanado badan sababo la xiriira khalkhal amni
Amni darrada darteed, Twitter wuxuu leeyahay farriimo toos ah oo ku kaydsan server-keeda oo la tirtiray, waxaana lagu heli karaa adigoo soo dejiya xogta.
Samsung ayaa qorsheyneysa in ay furto seddex dukaan oo lamid ah kuwa Apple ee Mareykanka
Samsung ayaa dhawaan ka furi doonta seddex dukaan oo cusub magaalooyinka New York, Los Angeles iyo Houston oo la mid ah Apple Stores si ay u helaan culeys. Halkan ka ogow!
Apple ayaa badalaysa codadka Ingiriiska iyo Australia ee Siri
Siri wuxuu bilaabay inuu ku daro codad cusub oo leh lahjad gaar ah oo Ingiriis ah oo loogu talagalay noocyada Ingiriiska iyo Australia.
Haweeney ayaa ogaatay inay la ildaran tahay tachycardia supraventricular mahad Apple Watch
Apple Watch ayaa markale badbaadisay nolol cusub kadib markii ay ogaatay kalkaaliso caafimaad oo guriga joogta wadna xanuun.
Taariikhda daalacashada Safari waxay u furantahay barnaamijyo badan oo ku saabsan macOS Mojave
Taariikhda daalacashada Safari waxay u furan tahay barnaamijyo badan oo ku saabsan macOS Mojave, falanqeeyaha amniga Jeff Johnson ayaa ogaaday
Phil Schiller wuxuu istaagay Marbella gudaha Spain si uu ugu raaxeysto dhacdo Audi ah
Madaxweyne ku xigeenka Apple ee Suuqgeynta Caalamka Phil Schiller ayaa lagu arkay magaalada Marbella ee dalka Spain xaflad ay soo qaban qaabisay shirkadda Audi
Apple waxay ku qasbi doontaa dhammaan horumariyeyaasha inay ku ilaashadaan xisaabaadkooda iyadoo la adeegsanayo xaqiijin laba-tallaabo ah
Haddii aad leedahay koonto sameeysa Apple, waxay kugu qasbi doonaan inaad daarto XNUMX-Tallaabo Xaqiijinta si loo ilaaliyo xisaabaadkaaga.
Apple Pay waxay ku degaysaa Czech Republic bisha Febraayo 19
Tikniyoolajiyadda lacag-bixinta ee wireless-ka ah ee Apple ayaa laga heli doonaa Czech Republic laga bilaabo Febraayo 19.
Podcast 10 × 19: Bisha Maarso 25 waxaan yeelan doonnaa nuxur
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo Actualidad iPhone waxay kulmeen si ay u duubaan Podcast cusub oo ay la socdaan wararkii ugu dambeeyay ee Apple
Instagram waxay tijaabineysaa inay ku darto Toos nashqada shabakadeeda desktop
Instagram waxay sameyn laheyd tijaabooyin qaar si loogu daro Direct iyada oo loo marayo degelkeeda desktop ee Mac iyo Windows. Soo ogow!
Patent-kii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu na tusayaa sida Aqoonsiga Face-ka loo adeegsan karo gaari
Patent-kii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu na tusay sida loo aqoonsan karo iPhone Face ID baabuurta iyo gawaarida kale, taasoo ka dhigaysa kuwo amnigooda la sugo.
Juun 3-7 waa taariikhda suuragalka ah ee WWDC 2019
Apple waxay keydineysaa Xarunta Shirarka McEnery ee San Jose, California WWDC 2019 bisha Juun ee sanadkan
Apple horeyba waxay uheesay madaxii ugu horeyay ee suuq geynta xaqiiqda
Waxay u muuqataa in Apple ay ku daashay horumariyeyaasha aan la qabsan barmaamijka dhabta ah ee la kordhiyay ee ay iyaga siiso waxayna abuurtay boos cusub oo lagu hormariyo.
Amazon waxay heshay shirkadda eero si loo wanaajiyo isdhexgalka otomaatiga guriga
Amazon waxay iibsan laheyd shirkadda router-ka iyo aaladaha Wi-Fi eero si loo wanaajiyo aaladaha otomaatiga guriga. Soo ogow!
Tim Cook wuxuu ku biiray isbahaysiga si loo ilaaliyo soo galootiga Ameerika
Tim Cook wuxuu ku biiray isbahaysi ay la leeyihiin agaasimayaal waaweyn si loo ilaaliyo soogalootiga iyo "Dreamers" ee ku nool Ameerika. Halkan ka ogow!
Apple wuxuu ku tijaabin karaa noocyada 'Mac' noocyada leh 'ID ID' iyo shaashad taabasho ah
Sida laga soo xigtay xanta cusub, ragga ka socda Cupertino waxay ka shaqeynayaan dhowr nooc oo ah Mac oo leh shaashad taabasho iyo tikniyoolajiyadda Aqoonsiga Face
Cusbooneysiin cusub oo loo yaqaan 'MacBook Air' iyo 'Mac mini' ayaa yimid Apple Stores oo dalal badan ku yaal
Cusbooneysiinta cusub ee 2018 MacBook Air iyo Mac mini ayaa hadda sidoo kale laga iibsan karaa Mareykanka iyo Kanada, iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka Yurub.
Apple waa la dacweeyay sababtoo ah xaqiijinta laba qodob ayaa aad u gaabis ah
Apple waa la dacweeyay sababtoo ah xaqiijinta laba qodob ayaa aad u gaabis ah diiwaangelinta ka dib waxaan heysanaa oo kaliya 14 maalmood oo aan dib ugala noqonno adeegga
MacBookga ugu horeeya retina iyo Mac mini waxay yimaadaan qeybta dib loo cusboonaysiiyay ee Dukaanka Apple
Markii ugu horreysay ee 'MacBook Air retina' iyo 'mini mini' ee 2018-ka waxay yimaadaan qeybta dayactirka ee Dukaanka Apple. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 759 oo yar illaa 1749 XNUMX
Apple waxay shaqaaleyneysaa dhakhtarka dhalmada Christine Curry si ay diirada u saarto caafimaadka haweenka
Caafimaadka haweenka ayaa noqday qodob lagu tixgaliyo jiilalka mustaqbalka ee Apple Watch iyo saxiixa ugu dambeeyay ayaa cadeynaya.
Ka sarreynta Microsoft iyo Amazon suuqa saamiyada had iyo jeer way wanaagsan tahay
Tufaaxa Apple wuxuu ku koraa suuqyada saamiyada isaga oo ku boodaya oo xaddidan Arbacadii la soo dhaafayna waxaa laga dhigay meel ka sarreysa kuwa ay xafiiltamaan ee ugu weyn Mareykanka
Waxay ka helaan macOS Mojave dhiigmiirad ah oo galaangal u noqon kara furayaasha furaha furaha
Waxay ka helaan macOS Mojave dhiigmiirad ah oo galaangal u noqon kara furayaasha furaha furaha. Soosaaraha ma doonayo inuu la wadaago macluumaadkan Apple
Safari waxay ka tagi doontaa hawsha "Ha Raadsan" marinka biyo mareenka
Raadiyaha Safari ee macOS iyo macruufka ayaa ka tagaya Safari wuxuu ka tegayaa hawsha "Ha Raadsan" oo u adeegta ka hortagga bogagga inay na daba galaan
Sababtaas awgeed jabinta T2 ayaa xannibaya xoogaa hagaajin ah oo ku saabsan adeegyada aan la oggolaan
Sababtaas awgeed jabinta T2 ayaa xannibaya xoogaa hagaajin ah oo ku saabsan adeegyada aan la oggolaan. On Mac, adeegga farsamada wuxuu leeyahay barnaamij gaar ah.
Gawaarida Khariidadaha Apple waxay si ficil ah ugu safri doonaan Spain oo dhan labada bilood ee soo socota
Shalay waxaan kugu wargalinay balaarinta adeega khariidada Apple, garoomada diyaaradaha iyo xarumaha dukaamaysiga. Nasiib wanaag,…
Kaadhadh hadiyado ah oo lagu iibsanayo Mac ama Ipad ee ku-dhiirrigelinta “Ku noqoshada Dugsiga” ee Japan
Apple waxay ka bilaabataa Japan kor u qaadida fasalka ardayda, waalidiinta, macalimiinta iyo shaqaalaha maamulka ee wadanka
Apple waxay si muuqata u iibsatay boos tafaariiqeed oo ku yaal Manhattan's Hudson Yards
Apple waxay u muuqataa inay iibsatay boos tafaariiqeed oo ku yaal Manhattan's Hudson Yards. Mashruuca waxaa heli kara Apple guga
Xarumo ganacsi oo cusub iyo garoomo diyaaradeed ayaa hadda taageera khariidadaha gudaha ee Khariidadaha Apple
Apple waxay hada ku kordhisay macluumaadka ay na siiso labadeena gudaha xarumaha wax laga iibsado iyo garoomada diyaaradaha iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha iyadoo loo marayo codsigeeda khariidada.
Banco Mediolanum wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Pay
Bangi kale oo ku biira adeegga lacag-bixinta iyada oo loo marayo Apple Pay. Xaaladdan oo kale waa Banco Mediolanum oo macaamiisheeda ayaa hadda ku dari kara kaararkooda
Madaxa Apple Store, Angela Ahrendts, ayaa ka tagi doonta Apple bisha Abriil
Masuuliyada ugu saraysa ee dukaamada Apple ee dhanka jirka iyo internetka, ayaa go aansaday inuu ka tago shirkada fadhigeedu yahay Cupertino, kadib markuu shaqeynayay 5 sano.
Apple waxay ku qasbanaan doontaa inay bixiso wax ka badan 570 milyan oo doolar oo canshuuraha aan la bixin ah oo laga bixiyo Faransiiska
Apple ayaa bixin doonta in ka badan 570 milyan oo Euro gudaha Faransiiska sanado badan oo canshuur lunsasho ah uu ka waday dalkaasi Shirkadda lafteeda ayaa xaqiijisay
Apple waxaa lagu qasbay inay adeegsato server-yada Ruushka si ay ugu kaydiso xogta dadka isticmaala dalka
Si loo waafajiyo sharciyada Ruushka, Apple waxay ku qasbanaan doontaa inay balaariso nooca macluumaadka ay hada ku kaydiso muwaadiniinta Ruushka ah ee wadanka jooga.
Kuwani waa sawirradii xayeysiinta 'Super Bowl Macintosh' ee 1984
Kuwaani waa sawir gacmeedyadii xayeysiinta Super Bowl Macintosh 1984. Labada maamule John Sculley iyo Steve Jobs ayaa ogolaaday xayeysiiskii ugu horreeyay ee Mac ah
Maamulaha Siri ayaa ka tagay Apple
Bill Stasior, oo ah madaxa Siri 7-dii sano ee la soo dhaafay, ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo Apple, iyadoo masuuliyadi ka saaran tahay John Giannandrea
Amazon Prime Video waa la cusbooneysiiyay Apple TV oo u oggolaanaya isticmaalka shaqada X-Ray
X-Ray wuxuu gaadhay Apple TV-ga loogu talagalay dadka isticmaala Amazon Prime Video, isagoo awood u leh inuu ogaado dhammaan faahfaahinta taxanaha mahadnaqa IMDb.
Apple wax lacag ah kama heli doonto iibinta HomePod iyo Apple TV 4K
Apple wax lacag ah kama heli doonto iibinta HomePod iyo Apple TV 4K. In kasta oo saacadihii ugu dambeeyay la beeniyay, Apple TV-ga waxaa lagu iibin lahaa qiimo halka HomePod lagu iibin lahaa khasaaro.
Twitter wuxuu joojiyaa astaamaha si loo helo kuwa raacsan iyadoo laga xannibayo marinka ay u leeyihiin shabakadda bulshada
Twitter wuxuu u istaagay meheradaha si uu u kasbado kuwa raacsan isaga oo gebi ahaanba ka xannibaya marinkooda API, si loo joojiyo spam.
Cudur daar ka timaada Apple kiiska FaceTime ee la xalin karo todobaadka soo socda
Apple waxay xaqiijineysaa in dhibaatada ka jirta wicitaanada kooxda FaceTime la xalin karo isbuuca soo socda ayna raali galin ka bixiso fashilka
+ Google+ dhibaatooyinka mar labaad: waxay u diraan emayl tilmaamaya jabsasho iyada oo loo marayo API-ga
Google+ ayaa mar kale la jabsan lahaa iyada oo loo marayo cillad API ah, maadaama ay ku soo wargeliyeen emayl cusub oo ay direen.
Daraasad cusub ayaa muujineysa inaan, celcelis ahaan, ku bixino wax ka badan rubuc sannad kasta internetka
Warbixintii ugu dambeysay ee ku saabsan isticmaalka internetka ee adduunka oo dhan waxay na tustay in aan waqti badan ku qaadanno khadka internetka ee warbaahinta, halkan ka ogow!
CookieMiner waa furintii ugu dambeysay ee laga helo Mac: waxay xadaysaa faahfaahinta bangigaaga sidoo kale waxay ka faa'iideysaneysaa awooddaada adigoon ogaanin
Halkan ka baro CookieMiner, oo ah khayaanadii ugu dambeysay ee loo soo saaray Mac-ga awood u leh inuu xado xogtaada kana faa'iideysto macdanta 'cryptocurrency'.
Sonos waxay sii deyneysaa cusbooneysiin si loogu daro YouTube Music
Sonos wuxuu la jaan qaadayaa YouTube Music iyo adeegyada YouTube Premium ee cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ay soo saartay soo saaraha afhayeenka
Shaqaale Apple ah ayaa loo xiray inuu xaday macluumaadka Mashruuca Titan
Injineer ka tirsan shirkadda Apple ayaa loo xiray inuu xaday macluumaadka shirkadda sirta ah ee la xiriira gawaarida iswada ee Project Titan
Apple wuxuu wajahayaa dacwaddii ugu horreysay ee cilladda amniga FaceTime
Dacwaddii ugu horreysay ee cilladda amniga FaceTime ayaa hadda la xareeyay maxkamad ku taal Houston, Texas.
Apple wuxuu naaska ka qaataa 1.400 milyan oo qalab firfircoon oo ay ku leeyihiin adduunka
Shirkadda Cupertino ayaa jabisay rikoor cusub oo ku saabsan aaladaha firfircoon ee adduunka oo dhan, iyadoo ka sarreysa tiradii sanadkii hore oo gaartay 1.400 milyan
Hal usbuuc ka badan, kooxda Actualidad iPhone iyo kooxda Soy de Mac ayaa kulmay si ay u duubaan dhacdo cusub oo ka mid ah Todo Apple Podcast.
Haweeney iyo wiilkeeda ayaa isku dayay inay la xiriiraan Apple toddobaadyo ka hor oo ku saabsan cilladda FaceTime, laakiin taageerada "ma caawin"
Cilladaha amniga ee kooxda FaceTime wicitaankeeda waxaa dhab ahaantii ogaaday wiil dhalinyaro ah oo 14 jir ah, laakiin Apple uma sahlana inay soo sheegaan.
Tani waa sida natiijooyinka maaliyadeed ee Apple ay ugu sii nagaadeen halka Macs, adeegyada iyo Apple Watch ay ku kordheen iibka
Natiijooyinka dhaqaale ee Apple soo bandhigtay maanta waa kuwii ugu xumaa 10 sano gudahood waxayna umuuqataa in rubuca soosocda sidoo kale adkaan doono
Maanta Apple waxaa lagu cusbooneysiiyay 50 kalfadhi oo cusub
Maanta Apple waxaa lagu cusbooneysiiyay 50 kalfadhi oo cusub oo lagu garto 3 qaybood: xirfadaha, socodka iyo Shaybaarada.
Apple waxay la wareegtay xuquuqda filimka Hala, oo ah mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee shirkadda Sundance
Apple waxay iibsatay xuquuqda aduunka oo dhan riwaayadda Hala oo ina tusaysa nolosha gabar 17-jir Muslimad ah oo ku nool Mareykanka
Soosaarida 2013 Mac Pro ayaa dib udhacday sababo laxiriira maqaayadaha Mareykanka.
Soo saarista 2013 Mac Pro ayaa dib u dhacday cilado la'aan ka jirta Mareykanka Warkani wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay socdaan doodaha ku saabsan wax soo saarka gudaha ama dibedda Mareykanka.
Adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple ayaa arki kara iftiinka bisha Abriil
Xog cusub ayaa sheegaysa in adeegga fiidiyowga ee Apple uu si rasmi ah u bilaabi doono bartamaha bisha Abriil isla markaana hadda kaliya laga fulin doono Mareykanka.
Apple wuxuu xannibayaa FaceTime si loo xalliyo arrin amni
Wiilasha Cupertino waxay si ku-meelgaar ah u naafoobeen wicitaan kooxeed iyagoo u maraya FaceTime, cilad darteed oo u oggolaatay wicitaannada fog ee ka yimaada qaataha
Apple phishing as protagonist bilowga sanadka
Dhowr isticmaale ayaa ka warbixinaya mowjado cusub oo emayllo ah oo ku socda phishing ama xatooyo aqoonsi marka waa inaan ka feejignaano arrintaas
Apple's Johny Srouji xaq uma yeelan doono jagada agaasimaha guud ee Intel
Ugu dambeyntiina waxay u muuqataa in madaxa processor-ka Apple, Jhony Srouji, uusan u tagi doonin Intel oo ah madaxa shirkadda.
Czech Republic sidoo kale waxay yeelan doontaa Apple Store dhawaan
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu la kulmay wasiiro kala duwan iyo saraakiil sarsare oo safarkiisa ku saabsan wasiirka Czech wuxuu kala hadlayaa Apple Store cusub oo ku yaala Prague
MacOS 10.14.4 beta wuxuu kuu ogolaanayaa inaad awood u yeelatid in lagu dhammaystiro Safari oo leh ID ID
Beta-ka macOS 10.14.4 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si firfircoon uga hawlgasho Safari oo leh ID ID, si aad u buuxiso foomamka ama aad uga hesho adeegyo shidma sawirka faraha.
Vizio wuxuu furaa beta si dadka isticmaala telefishinadooda ay u tijaabiyaan taageerada AirPlay iyo HomeKit
Haddii aad leedahay mid ka mid ah TV-yada ugu dambeeyay ee Vizio, waxaad hadda awood u yeelan doontaa inaad ku tijaabiso tikniyoolajiyadda AirPlay 2 si wadajir ah HomeKit iyo SmartCast 3.0 ee beta.
Maalgelinta dulsaar la'aanta ah, muujinta MacBook Pro, AirPods 2, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal maalin oo Axad ah waxaan ku soo uruurinnay qaar ka mid ah wararkii ugu fiicnaa toddobaadkan ee Soy de Mac ee ku saabsan Apple iyo guud ahaan teknolojiyadda
Bal qiyaas Documentaries waxay heshiis la gaareen Apple si ay u soo saaraan filimo iyo dokumentiyo
Heshiiskii ugu dambeeyay ee uu ku gaadho adeegiisa soo socda ee fiidiyoowga ah wuxuu la socdaa '' Documentaries '' oo laga leeyahay 'Ron Doard'
Kirada sanadlaha ah ee Apple Store cusub ee Chicago waa $ 2,5 milyan
Kharashka kireynta shirkadda Apple Store ee ku taal Chicago, waxay gaareysaa 2,5 milyan oo doolar, inkasta oo ay ku maalgeliyeen 80 milyan dhismaha.
Google waxay kireysaa injineer Apple ah si ay u horumariso Fuchsia OS
Ragga ku jira Google waxay kiraysteen injineer ka socda Apple si uu uga shaqeeyo horumarinta Fuchsia OS, nidaamka isku dheelitirka badan ee Google uu ku shaqeynayo.
In yar in ka badan 200 oo shaqaale "Project Titan" ah ayaa laga reebay mashruuca
Shirkadda ayaa dib u habeyn ku sameyneysa kooxda shaqada ee loo yaqaan Project Titan waxayna ka reebtay in ka badan 200 oo shaqaale ah.
Apple Pay waxay kordhisaa tirada bangiyada halka laga heli karo Kanada, New Zealand iyo Australia
Ragga ka socda Cupertino waxay ballaariyeen tirada bangiyada maanta taageera Apple Pay adduunka oo dhan.
Hulu waxay bilawday qorshe ka jaban si loo daboolo Netflix
Hulu waxay dhawaan soo bandhigtay qorshe ka jaban xayeysiis si ay toos ugula tartami karto shirkadda Netflix iyo kororkeedii ugu dambeeyay ee dalalka qaarkood
Bangiga ugu weyn Australia wuxuu ugu dambeyn la qaataa Apple Pay macaamiishooda
Tikniyoolajiyada lacag-la’aanta ah ee Apple, Apple Pay, ayaa hadda laga heli karaa bangiga ugu weyn Australia, ku dhowaad 4 sano ka dib markii laga bilaabay waddanka
Apple waxay soo bandhigeysaa warbixin ku saabsan saameynta isbedelka cimilada ee mustaqbalkiisa
Apple waxay soo bandhigeysaa warbixin ku saabsan saameynta isbedelka cimilada ee mustaqbalkiisa. Falanqee fursadaha, laakiin sidoo kale hanjabaadaha
Bakhaarka Apple ee Bariga Bariga New York wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Dhismaha
Dukaanka Sare ee loo yaqaan 'Upper East Side Apple Store' ayaa ku guuleystey abaalmarin ah dayactirka qaab dhismeedka gudaha ee dhismaha halka uu ku yaalo tan iyo markii la furay 2013
Xadhig aad u khafiif ah ayaa dhibaato ku keeni kara shaashadda MacBook Pro
Xadhig aad u khafiif ah ayaa dhibaato ku keeni kara shaashadda MacBook Pro.
Waa tan waxa Mac dareere qaboojiye u eg yahay
Haddii aad waligaa qiyaastay waxa dareeraha qabow ee Mac u ekaan kara, waxaad isku fikrad ahayd sida naqshadeeye Pierre Cerveau
Ganaax dhan 50 milyan oo euro oo loogu talagalay Google ee ku taal Faransiiska jabinta GDPR
Hay'adda maamusha ilaalinta macluumaadka isticmaalaha ee Faransiiska ayaa Google dul dhigaysa ganaax dhan 50 milyan oo yuuro
Apple wali uma hogaansana xeerarka EU ee ku saabsan ilaalinta xogta
Apple wali uma hogaansana xeerarka EU ee ku saabsan ilaalinta xogta. NGO A Austrian ah ayaa u shaqeeya Apple si ay ugu hogaansato tan.
Saamiyada Apple waxay ku soo noqotaa ogeysiiska dhimista dakhliga ka hor Cook
Saamiyada Apple ayaa ku soo laabanaya heerka ka hor inta uusan ku dhawaaqin Cook dhimista dakhliga. waxaan falanqeyneynaa waxyaabaha go'aaminaya hoos u dhaca qiimaha
HomePod hadda waxaa laga heli karaa Shiinaha iyo Hong Kong
HomePod-ka Apple ayaa hadda si rasmi ah uga degay Shiinaha, waddan u muuqda inuu dhabarka u jeediyay shirkadda.
Simon Kinberg wuxuu heshiis la galay shirkadda Apple si loo abuuro sheeko sheekooyin saynis ah
Apple waxay heshiis la gashay Simon Kinberg, oo soo saare ka ah laba filim oo loo yaqaan 'X-Men filmo', si loo abuuro taxane 10 ah oo saynis ah.
Johnson & Johnson JNJ, Janssen Pharmaceuticals oo ah lamaane cusub oo caafimaad Apple
At Apple waxay sii wadaan inay ku adkeystaan ​​arrimaha caafimaadka ee ay leeyihiin Apple Watch iyo gaar ahaan ogaanshaha hore ee dadka qaba fibrillation
Wear OS ee shirkadda Fossil Group ayaa laga iibiyey Google
Shirkadda Fosil iyo OS-keeda ee loo yaqaan 'Wear OS' saacadaha waxaa Google ku heshay lacag dhan 40 milyan oo doolar
Weerar culus oo cusub ayaa sii deynaya 773 milyan oo akoonno emayl ah: hubi haddii taada ay ku jirto
Weerar cusub oo culus ayaa kashifay ilaa 773 milyan oo akoonno emayl ah, marka lagu daro ereyada sirta ah ee qaarkood.
Tim Cook wuxuu dhaleeceeyay ka ganacsiga xogta dadka isticmaala shirkadaha qaar
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu dhaleeceeyay iibinta xogta isticmaale ee shirkado badan ay sameynayaan wuxuuna ku baaqayaa Sharci lagu xakameeyo tan
Amniga guud ee Tim Cook wuxuu ku kacay $ 310.000 sanadka 2018
Qiimaha badbaadada shaqsiyeed ee Tim Cook waa midka ugu hooseeya shirkadaha ugu waaweyn Silicon Valley
Sidan ayey u egtahay shaashadda Apple Watch suunka iyo kiiska AirPods ee soosaaraha Nomad
Nomad waxay soo saartay khad cusub oo Apple band ah iyo kiisaska AirPods ee u dhigma oo laga sameeyay maqaarka dabiiciga ah.
Bill Murray iyo Sofia Coppola si ay dib ugu midoobaan filimkii ugu horreeyay ee Apple
Bill Murray wuxuu ku biiri doonaa Sofia Coppola abuurista shirkadii ugu horeysay ee Apple kusoo biirto dhanka filimada
Taxanaha 'Apple Watch Series 4' wuxuu badbaadiyay nolosha wiil qaba cillad aan caadi ahayn
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu ku guuleystey inuu badbaadiyo nolosha nin isagoo ka digaya fibriska atrial iyo garaaca wadnaha oo sareeya
10 × 15 Podcast: Apple gudaha 2019
Toddobaad kale, dhammaan iPhone-ka iyo aniga oo ka socda kooxda Mac Activity ayaa la kulmay si aan uga wada hadalno wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira adduunka Apple iyo hareeraheeda.
Apple ayaa 50 duulimaad maalinle ah ka iibsata San Francisco ilaa Shanghai
Shirkadda Cupertino waxay si joogto ah uga duushaa San Francisco ilaa Shanghai ujeedkan awgeedna waxay buugaag uga dhigtaa 50 duulimaad oo fasalka ganacsiga ah
Miyaad ka fikireysaa inaad guri ka dhigato? Koogeek waa macquul waana lacag aad u yar
Haddii aad raadineyso sida aad ugu noolaan laheyd gurigaaga, qalabka Koogeek uma baahnid inaad lacag badan ku qarash gareyso waxaadna heli doontaa dhammaan fursadaha suurtogalka ah ee aad heli karto.
HomePod wuxuu imaan doonaa Shiinaha Janaayo 18
Afayeenka caqliga badan ee Apple, HomePod, wuxuu horey taariikh rasmi ah ugu leeyahay Shiinaha iyo Hong Kong: waxay noqon doontaa 18-ka Janaayo
Saami qaybsi laba jeer ah, saamiyada Samsung ayaa hoos u dhigaya, AirPlay 2 ayaa sii fidaya iyo qaar kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Mar labaad dib-u-soo-celinta toddobaadlaha ah ee muhiimka ah ee aan ka imid Mac sida noocyada beta-ka cusub ee la sii daayay iyo imaatinka AirPlay 2 iyo warar kale
Codsi saxeexyo ayaa furmaya si loo waydiiyo LG inay ku darto taageerada AirPlay TV-yada sanadaha kale
Isticmaalayaasha telefishannadii hore ee LG waxay fureen shirkado badan oo ay ka mid yihiin tikniyoolajiyadda AirPlay.
Waa tan buugga Apple loo adeegsaday si loogu dhiirrigeliyo iibiyeyaasha Mac adduunka oo dhan
Apple waxay abuurtay buug iib ah oo loogu talagalay iibiyeyaasha inay yeeshaan tababbarka lagama maarmaanka ah si loogu qanciyo macaamiisha mustaqbalka inay iibsadaan Mac.
Iibinta Mac ayaa mar kale hoos u dhacday rubucii ugu dambeeyay ee 2018
Rubucii ugu dambeeyay ee 2018 uma fiicneyn iibinta kumbuyuutarka Mac, haddii xogta daraasadda uu daabacay Gartner ugu dambeyn la xaqiijiyo.
Raadinta albaab-ka-albaab ayaa hadda laga heli karaa Hindiya iyada oo loo marayo Khariidadaha Apple
Laga bilaabo xilligan, waxaan mar horeba u isticmaali karnaa Khariidadaha Apple-ka si aan uga guurno dalka guri ilaa guri iyadoo ay ugu wacan tahay jihooyinka hagitaan ee ay na siiso.
Saamiyada Roku ayaa hoos u dhacday ka dib markii lagu dhawaaqay isdhexgalka AirPlay 2 ee shirkadaha waaweyn
Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay saameeyeen isdhexgalka AirPlay 2 iyo soo saarayaasha TV-ga waa Roku
Sandy Parakilas ayaa ku biiray Apple ka dib markii uu ka tagay Facebook
Tim Cook wuxuu difaacayaa ficilka Apple wuxuuna u maleynayaa in nidaamka deegaanka Apple la dhayalsaday. Tim Cook wuxuu wareysi siinayaa CNBC
Appla waxay hadda u oggolaaneysaa shirkadaha saddexaad inay ku daraan tikniyoolajiyadda AirPlay telefishinnadooda, xitaa iyagaana lagu xakameyn karaa Siri. Halkan ka ogow!
LG TVs sidoo kale waxay la jaan qaadi doonaan tikniyoolajiyadda shirkadda Apple ee AirPlay 2 marka lagu daro HomeKit.
OneDrive waxay hadda bixisaa faylal ku saabsan muuqaalka muuqaalka ee 'macOS'
Suurtagalnimada in lala shaqeyn karo feylasha ku keydsan OneDrive adiga oo aan soo dejisan dhammaan waxyaabaha ku jira Mac-keena MacOS Mojave.
Maamulaha injineernimada ICloud wuxuu ka tagayaa Apple inuu ku biiro bilowga
Mid ka mid ah maareeyayaasha sare ee iCloud, Patrick Gates ayaa hadda ku dhawaaqay inuu ka tagayo shirkadda ka dib 14 sano oo uu ku sugnaa Apple.
Filashooyinka natiijooyinka dhagaxa hoose
Apple waxay soo bandhigi doontaa dakhli ka hooseeya rubuca koowaad, shirka Janaayo 29
Apple waxay soo bandhigi doontaa dakhliyada hoose rubuca hore shirka 29-ka Janaayo. Sixid xagga hoose ee tirada dakhliga ayaa la filayaa
Japan waxa loogu yeero "Bacda nasiibka leh" lama heli karo laakiin qiimo dhimisyo kala duwan ayaa ka muuqda
Japan waxa loogu yeero "boorsooyinka nasiibka leh" lama heli karo laakiin qiimo dhimisyo kala duwan ayaa muuqda
iMazing, Qalabka Tilmaaman ee 2018, Kaydka Apple, iyo Inbadan! Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan in Apple ay noqon doonto shirkadda tiknoolajiyadda ugu dhaqsaha badan 2019
Falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan in Apple uu noqon doono shirkadda tikniyoolajiyadda ee sida aadka ugu koraysa suuqa saamiyada sanadka 2019, iyadoo lagu saleynayo iibka adeegyada iyo aragtida ku aaddan macmiilka.
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijinaysaa iibsashada Tesla! [INNOCENT]
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijinaysaa iibsashada Tesla!
Google horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad raacdo raadadka Santa Claus iyada oo loo marayo qalabkeeda sida sanad kasta
"Google Santa Tracker", oo ah aaladda Google kuu saamaxaysa inaad raacdo raadadka Santa Claus, ayaa hadda qof walba laga heli karaa degelkiisa. Soo ogow!
Horumarinta iMazing wuxuu ka baxayaa Setapp Platform
Dejiye iMazing ayaa ka tegaya barnaamijka 'Setapp platform'. Wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii, laakiin qaabka ganacsi ee hadda jira uma dhigmo
Khariidadaha Apple ayaa lagu cusbooneysiiyaa macluumaadka cusub ee taraafikada iyo gudaha garoomada diyaaradaha
Khariidadaha Apple waxaa lagu cusbooneysiiyay macluumaad cusub oo ku saabsan taraafikada iyo gudaha garoomada diyaaradaha, oo laga kala keenay adduunka. Qorsheynta safar way fududaanaysaa
Kaarka shaqooyinka, betas ee qof walba, Apple Music leh Alexa iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple waxay cusbooneysiineysaa boggeeda internetka ee hufnaanta leh naqshad soo jiidasho badan
Apple waxay gabi ahaanba dib u qaabeyn ku sameysay degelkeeda daahfurnaanta warbixinnada dowladda, iyadoo xog badan lagu matalay is-dhexgal.
Blackmagic eGPU Pro ayaa hadda laga heli karaa iibsiga Apple Store Online, in kasta oo rarku dib u dhacayo illaa bisha Janaayo. Dhamaan macluumaadka.
John Giannandrea wuxuu noqdaa Apple's SVP ee Barashada Mashiinka iyo Istaraatiijiyadda Sirdoonka Artificial
John Giannandrea wuxuu horeyba uga mid ahaa kooxda fulinta Apple, isagoo qaadanaya doorka SVP ee Barashada Mashiinka iyo inbadan.
Kaaliyaha Google wuxuu ku garaacaa HomePod jawaabaha saxda ah, laakiin aad ayey ugu dhow yihiin xagga fahamka
Isbarbardhigga ugu dambeeyay wuxuu ku caleemo saaray Google Home inuu yahay afhayeenka ugu fiican caqliga marka loo eego AI, laakiin HomePod oo leh Siri sidoo kale ma foga.
Ugu dabbaaldeg Kirismaska ​​MacXDVD iyo Ku guuleysta iPhone XR, Ruqsadaha Bilaashka ah iyo Waxyaabo Kale
Hadda waxaad ka heli kartaa rukhsad bilaash ah MediaTrans, VideoProc iyo inbadan oo aad ugu mahadcelisid dhiirrigelinta MacX Christmas, iyo xitaa iPhone XR ama Apple Watch.
Apple waxay u siineysaa asxaabta iyo qoysaska wax ku iibsashada barnaamijyada App Store
Apple ayaa dhowaan u oggolaan doonta inay siiso isticmaaleyaasha kale wax ka iibsashada gudaha barnaamijyada (app-ka) ee App Store. Halkan ka ogow!
Apple Music ayaa si rasmi ah ugu socota dhammaan aaladaha leh Alexa
Hal toddobaad, kooxda Actualidad iPhone y Soy de Mac waxay kulmeen si ay u duubaan Podcast-kii ugu dambeeyay ee sanadka, iyagoo soo koobaya 2018.
Snoopy wuxuu kula laaban doonaa telefishanka Apple
Snoopy wuxuu ku laaban doonaa shaashadda yar iyadoo adeegsan doonta adeegga fidinta fiidiyaha ee mustaqbalka ee Apple.
Apple wuxuu bilaabaa iibinta kiisaska dadka saddexaad ee AirPods dukaankiisa internetka (kaliya gobollada qaar)
Apple waxay bilowday iibinta dacwad daabacan oo gaar ah oo loogu talagalay Catalyst AirPods dukaankooda internetka ee Mareykanka.
Apple waxay heshiis la gaadhay agaasimaha dhowr filim oo Fast and Furious ah
Adeegga fiidiyowga ee 'Apple streaming' wuxuu ka mid noqon doonaa buugyaraha taxanaha ah, badeecadaha uu soo saaray agaasimaha dhowr filim oo deg deg ah oo degdeg ah, Justin Lin.
Apple waxay ka bilaabaysaa YouTube casharro fudud oo fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala Apple Watch
Apple waxay soo saartay casharro fiidiyoow ah oo fudud oo fudud oo laxiriira Apple Watch iyo watchOS iyada oo loo marayo kanaalka YouTube. Soo ogow!
Adobe XD ayaa lagu cusbooneysiiyay warar xiiso leh
Adobe XD waxay heshay cusbooneysi cusub, oo ay diiradda ku saareyso wax ka beddelka feylasha ee daruuraha oo leh 'Cloud Cloud' iyo waxyaabo yar oo dheeri ah.
Chip T2 wuxuu Mac-ga ka ilaaliyaa isku dayga marin-u-helidda erayga sirta ah ee khiyaanada leh
T2 Chip wuxuu Mac-ga ka ilaaliyaa isku dayga marin-u-helidda erayga sirta ah ee sirta ah, isagoo si tartiib tartiib ah u xiraya nidaamka.
Haa, ING waxaa laga heli doonaa Jarmalka oo leh Apple Pay
Sababtaas awgeed Apple waxay ku dhegan tahay inay soo saarto Macskeeda meel ka baxsan Silicon Valley
Sababtaas awgeed, Apple wuxuu ku dhegan yahay inuu soo saaro Macskiisa meel ka baxsan Silicon Valley. Khibradda Apple ma ahayn mid wanaagsan, waxay u wareejisay wax soo saar dalal kale
Steam wuxuu joojin doonaa taageerida Mac-yada OS X Yosemite iyo noocyadii hore ee nidaamka qalliinka
Laga bilaabo 2019, Steam mar dambe la jaan qaadi maayo kuwa Mac-yada ah ee weli ku rakiban OS X Yosemite ama nooc hore, halkan ka raadi!
Platoon for Apple, ogeysiisyada riixa iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Haddii aad isticmaaleyso OS X Yosemite, ha u cusbooneysiin nooca ugu dambeeya ee iTunes
Dav1d ee macOS decoder-kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'codec AV1'
Dav1d ee macOS decoder-kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'codec AV1'. Mashruucan ka dambeeya oo leh magaca Alliance for Open Media waa kooxda VideoLAN (VLC) iyo FFmpeg
Furaha sirta ah ee aad ku isticmaasho Mac-gaaga? «123456» waxaa loo caleema saaray sanadkii 5aad oo isku xigta sida ugu isticmaalka badan
Furaha sirta ah ee aad ku isticmaasho Mac-gaaga? "123456" waxaa loo caleemo saaray sanadkii 5aad oo xiriir ah sidii loogu isticmaal badnaa
Seddex Xayeysiis Apple ah oo ka mid ah kuwa ugu fiican 2018 Sida uu sheegayo Adweek
Sida laga soo xigtay wakaaladda Adweek, saddex xayeysiis oo Apple ah ayaa ka mid ah 25-ka sare ee u muuqday kuwa ugu wanaagsan sanadka 2018 oo dhan.
Isku xidhka ayaa hal talaabo u jira in laga waayo Apple Music
JJ Abrams inuu jiheeyo taxanaha Apple ee ay jileyso Jennifer Garner
JJ Abrams iyo Jennifer Garner ayaa mar kale kulmi doona iyagoo uga mahadcelinaya taxanaha cusub ee ay u soo saari doonaan adeegga fiidiyowga ee Apple.
Apple waxay isu diyaarineysaa inay Netflix ka soo saarto joornaalada
Apple wuxuu bilaabi karaa adeegiisa cusub ee bil kasta, ee majaladaha kiiskan, bilawga sanadka ka dib iibsashada shirkadda Texture.
Tamara Hunter wuxuu ku biirayaa Apple wuxuuna noqon doonaa madaxa VOD casting
Saxiixii ugu dambeeyay ee Apple ee barnaamijkeeda fiidiyoowga ah waa Tamara Hunter, oo ah maamule ka socda shirkadda Sony oo kormeeri doona filimka.
Microsoft Remote Desktop-ka loogu talagalay Mac waxaa lagu cusbooneysiiyaa taageerada macOS Mojave mode mugdi iyo inbadan
Macmiilka Microsoft Remote Desktop ee Mac ayaa la cusbooneysiiyay, isagoo ku daray taageerada macOS Mojave mode mugdi iyo inbadan. Soo ogow!
MacOS Mojave wuxuu tilmaam u yahay Vega GPU-yada cusub ee aan weli la shaacin
Jiilka soo socda ee 'MacBook Pro' wuxuu ka imaan karaa gacanta noocyo cusub oo sawiro AMD Vega ah
Apple wali dib ugama laaban suuqa saamiyada iyo walwal
Supermicro waxay xaqiijineysaa inaysan jirin wax "shar" ah oo ku jira Apple iyo Amazon